Ny Oppo F11 Pro dia miseho an-tànana amin'ny horonantsary ary manambara ny tena endriny | Androidsis
Ny Oppo F11 Pro dia miseho amin'ny alàlan'ny horonantsary ary manambara ny tena endriny
Pre-baiko avy amin'ny Oppo F11 Pro manomboka tsy ho ela any India, na dia mbola tsy nanamafy ny daty fandefasana azy aza ny orinasa.
Ny tsaho manodidina ny telefaona dia nilaza fa afaka hivoaka amin'ny herinandro voalohan'ny volana martsa izy io. Ny tatitra vao haingana dia namoaka kinova sy sarin'ny F11 Pro, saingy androany dia misy horonantsary azo ampiharina amin'ny telefaona niseho hanambara ny fisehoany amin'ny zava-misy.
Ny horonan-tsary ataon'ny F11 Pro, izay 4 segondra monja, dia manome anao topy maso ny fampisehoana tsy dia kely. Ny bezel ambany sy ambony dia tsy hita miharihary satria mihetsika ny fampiharana fakan-tsary. Ny tery valan'ny telefaona dia tery ihany.
- Boby Đỗ （杜成忠） (@ Boby25846908) Febroary 20, 2019
Ny mpanamboatra dia efa nilaza fa ny sisin'ny finday Izy io dia manana snapper selfie pop-up 32 megapixel. Ny fakan-tsarimihetsika selfie pop-up dia tsy tazana amin'ny horonantsary tafaporitsaka satria miafina any amin'ny sisin'ny farany fitaovana.
Ny tontonana aoriana, izay misy faran'ny gradient, dia misy fakan-tsarimihetsika miorina avo roa heny arahin'ilay scanner fanaovana dian-tànana miendrika oval. Efa nanamafy izany ny mpanamboatra sinoa dia hampiditra sensor voalohany 48 megapixel. Ho fanampin'ny fanontana Thunder Black hita amin'ny horonantsary, antenaina ho tonga amin'ny kinova Aurora Green ihany koa ny telefaona.
Ny Oppo F11 Pro dia mety ampiasain'ny chipset MediaTek, izay ho valo fototra, mazava. Ireo teaser vao haingana navoakan'ny orinasa dia manamarina fa misy seranan-tsambo USB-C sy jack audio 3.5mm. Toy ny telefaona teo aloha, ny Oppo F9, ny maodely manaraka dia antenaina ihany koa hanohana ny haitao haingam-pandeha VOOC. Mandeha ihany koa ny resaka fa hidina any India izy miaraka amin'ny vidiny 25,000 300 rupees, izay XNUMX tapitrisa euro eo ho eo ny sandam-bola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Oppo F11 Pro dia miseho amin'ny alàlan'ny horonantsary ary manambara ny tena endriny
Ofisialy: ho tonga amin'ny fomba 9 ny Meizu Note 6!
HMD Global dia mandefa Android 9 Pie (Go Edition) ho an'ny Nokia 2.1